Mila miomana dieny izao… | NewsMada
Mila miomana dieny izao…
Par Taratra sur 06/11/2021
Efa ao anatin’ny vanim-potoana mialoha ny fampielezan-kevitra izao? Efa misy ny vondrona na antoko politika miomana amin’ny fiatrehana izany: manamafy sy manatevina ny ambaindain’ny antoko: manao kongresim-paritra, ohatra. Na ny mpanao politika mandeha irery amin’ny famadibadihana palitao aza, mitady izay hosarangotina. Tsy maintsy mahazo toerana na iza na iza eo amin’ny fitondrana? Tsy mitaingina soavaly maty, fa aleo alika velona toy izay soavaly maty, araka ny oha-pitenenana.
Izao vanim-potoana izao indrindra no ilàna fitandremana, fa misy ny tsy mena-mivadika. Misy koa ny misolelaka noho ny fikendrena tombontsoa manokana. Mety hitranga avokoa izany? Tsy mbola misy fiovana na fanovana firy ny fomba fanaovana politika; eny, efa eo aza ireo sahirana fa tsy mahita ny rirany na mangirana amin’izany: miandry sy manantena korontana na minia mamboly izany hahazoana fahefam-panjakana, mitaky fiaraha-mitantana amin’izay lazaina ho tsy fahombiazan’ny mpitondra…
Tsy mandaitra na tsy mahomby intsony ny toy izany? Mila miatrika fifidianana amin’ny fomba mazava amin’izay raha te hahazo fahefam-panjakana. Ny tanjaka no hahazoana fitondrana, fa tsy ny fahazoana fitondrana no mampatanjaka… tampoka. Mila fiomanana sy faharesen-dahatra ela izany, fa tsy vitan’ny kitsapatsapa na vokatry ny kisendrasendra. Fiainana sy fampiharana izany izao vanim-potoana mialoha ny fampielezan-kevitra izao? Raha ny marina, mandritra ny fotoana rehetra aza izany.
Izany rehetra izany no ahitana sy anavahana izay antoko na mpanao politika loza raha hialokaloka amin’ny hafa fotsiny. Loza fa tsy mena-mivadika rehefa mby amin’izay tsy metimety amin’ny ny raharaha noho ny tombontsoa manokana, enta-mavesatra ho an’ny hafa fa mila tambiny sy tombony amin’ny ataony…. Manomboka mirongatra indray izany rehetra izany amin’izao ankatoky ny fampielezan-kevitra sy fifidianana izao. Dieny izao, mila jerena ny hoe: iza no inona, iza no nanao inona… ?